Semalt: Ahoana ny famonosana pejy Internet amin'ny fampiasana Google Chrome Extension
Ny scraper dia rakitra iray izay mamaky ireo tranonkala ary mamoaka vaovao mahasoa avy amin'ny tranonkala. Ny fanariam-pitaovana lehibe indrindra dia ny vahaolana farany hahazoana angona marina avy amin'ny tranokala sy tranonkala mankany Microsoft Excel. Google Screenshot Extension Google Chrome dia fitaovana maoderina maoderina izay miasa amin'ny Windows sy Mac OS.
Nahoana no Google Scrapbook Extension?
Google Scrabble Extension Google Chrome dia fitaovana maoderina maoderina maimaim-poana alefa ao amin'ny Chrome Web Store. Ity fitaovana fandiovana dia napetraka ao amin'ny tranokala Chrome ho plugin. Ny plugin dia mamela ireo mpitoraka bilaogy sy mpandraharaha hivarotra ny angona avy amin'ny tranonkala amin'ny alàlan'ny bokotra havanana amin'ny singa iray. '' Tokony hipoitra eo amin'ny efijery ny '' Scrape Similar '' raha toa ka tsindrio eo amin'ny singa iray.
Fampidirana amin'ny XPaths
XPath dia fiteny iray ampiasaina mba hahitana ny fampahalalana manan-danja amin'ny rafitra XML. Ny tahiry HTML dia ohatra tena tsara amin'ny rafitra XML. Ny XPath dia matetika ampiasaina mba hisafidianana ireo tanjaky ny tariby. Amin'ity sehatra ity, dia hampiasaina ny XPaths mba hamaritana ny lahatsoratra ho entina amin'ny pejy web. Hanampy koa ny XPaths hamantatra ny anaran'ny antoko sy ny nomeraon'ny solombavambahoaka Soedoà.
Mampiasa ny Google Scraper mba hahazoana ny antsipirihan'ny adiresy Solombavambahoaka 349
miaraka amin'i Scraper Chrome, ny fampindramana ny vaovao avy amin'ny tranonkala dia tsy mora sady mahatalanjona ihany koa. Hahafinaritra anao ny dingana sy ny teknika.
Ny tranonkala dia mitanisa ny mpikambana Soedoà rehetra sy ny adiresiny. Hanombohana, tsindrio mahitsy amin'ny MP ary mifidiana "Scrape Similar. "Tokony hijery ity fampisehoana manaraka ity eo amin'ny efijery ianao.
Raha toa ka tsindrio eo amin'ny solosainao ny solosaina iray ary tsindrio ny "Tsindrio ny singa," dia hisy lisitry ny abidy amin'ny "" grid_6 alpha omega fitadiavam-pikarohana fikarohana ". Dingana roa no hampiasaina hanakarana ity pejy web ity. Ny dingana iray dia handraisana ny fametahana marika ahitana antontanisa MPs amin'ny XPath. Ny dingana roa dia mitaky ny fisafidianana singa manokana amin'ny angon-drakitra toy ny anaran'ny antoko, anarana, ary laharan'ny finday ary handamina ny angon-drakitra amin'ny tsanganana.
Dig deeper amin'ny rafitra HTML ary mitazona ireo singa tsy voaaro. Ampisehoy ireo marika hamantarana ny isan'ireo tags mifanaraka amin'ireo singa ao amin'ny rafitrao. Ampahafantaro ny andro farany ahitana ny angona voatahiry. Manaova fikarohana XPath amin'ny rafitra, tsindrio ny "Scrape. "
Lisitra ahitana rantsana 349 dia haseho eo amin'ny efijery. 349 dia maneho ny isan'ny isan'ireo Solombavambahoaka Soedoà.
Mamolavola ireo angon-drakitra voatondro. Jereo ny code HTML ao amin'ny tranonkala izay nampiasainao. Amin'ity tranga ity, ireo singa azo alaina amin'izao fotoana izao dia asongadina amin'ny mavo. Ampidiro ny XPaths ao amin'ny sehatr'ireo tsanganana ary tsindrio ny "Scrape" mba hamaha ilay plugin.
Raha manana fahalalana fototra momba ny XPaths ianao, dia tsy ho asa goavana ho anao ny fandaharana fandaharana. Ireo fepetra voalaza etsy ambony dia hitarika anao amin'ny fomba hikirakira ny tranonkala. Raha toa ianao ka miasa amin'ny pejin-tranonkala maro dia mila manana programmeur Source .